Sidee Talaalka COVID-19 loogu qeybiyay Maamullada? | KEYDMEDIA ONLINE
12 April 2021 Barlamaanka oo Farmaajo u sameeyay muddo kordhin
12 April 2021 Barlaamaanka oo ka doodaya muddo kororsi
12 April 2021 RW Rooble oo safar ku tagay Aw-dheegle
Sidee Talaalka COVID-19 loogu qeybiyay Maamullada?
Talaalka ayaa isla markii la keenay dalka waxaa la geeyay Puntland iyo Somaliland, iyadoo Maamullada kale wali aan helin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Isniintii lasoo dhaafay, Soomaaliya ayaa heshay talaalkii ugu horeeyay ee COVID-19, kaasoo lagu billaabay dadka in la siiyo, iyadoo aan dowladda u sameynin mudnaan dadka la hormarinayo ee u nuqul cudurka.
Dalka waxaa lasoo gaarsiiyay qeybtii ugu horeysay oo ka kooban 300,000 oo Talaalka AstraZeneca oo ay sameysay Oxford, waxaana loo kala qoondeeyay dhamaan Maamul Goboleedyada iyo Somaliland, waxayna u kala heleen sida soo socota:
Koonfur Galbeed: 30,000
Keydmedia Online ayaa baaritaan ku haysa warar soo baxaya oo ku saabsan in Talaalka lagu bixiyo nidaam musuq-maasuq ah, iyadoo dadka hadda gacanta ku haya lagu eedeeyay inay doonayaan lacag in laga dhigo qofka la siinayo.
Isbitaalka Martiini oo ah xarun dowladeed oo dadka loogu adeego ayaa bukaanada la jiifiyo waxaa laga qaadaa lacaga Ogygen-ta lagu xiro, taasoo hay'ado, shirkado Soomaaliyeed iyo dad ahlu kheyr ah ugu deeqeen.
COVID-19 wuxuu Soomaaliya ka noqday Mashruuc dad gaar ah ay dhaqaalo ka sameynayaan, iyadoo Xukuumaddii hore ay ku maqan tahay malaayiin dollar iyo agab caafimaad oo loogu deeqay Shacabka.